Caqabadaha muhiimka ah ee dalxiiska ee Yurub ayaa lagu muujiyey Madasha Slovenia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Slovenia Breaking News » Caqabadaha muhiimka ah ee dalxiiska ee Yurub ayaa lagu muujiyey Madasha Slovenia
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Slovenia Breaking News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Waxaa la joogaa waqtigii wax laga qaban lahaa cilladaha ka jira warshadaha dalxiiska ee ka dhashay ballaarinta 50 -kii sano ee la soo dhaafay oo dalxiiska loo beddeli lahaa warshad aad u cagaar badan, dijitaal ah oo loo dhan yahay.
Madasha Istaraatiijiyadeed ee Bled waa shir caalami ah oo ka socda Bartamaha iyo Koonfur-Bari Yurub.
Faafida COVID-19 waxay su’aalo badan u keentay dalxiiska.
Doorka dalxiiska ee heer EU wuxuu u baahan yahay in dib loo fiiriyo.
Madasha Istaraatiijiyadeed ee Bled waxay isu beddeshay shir caalami ah oo hormuud u ah Bartamaha iyo Koonfur-Bari Yurub. Daabacaadii 16aad waxay dhacday 31 Ogosto - 2 Sebtember qaab isku -dhafan. Guddiga dalxiiska ee la qabtay 2dii Sebtember ayaa isu keenay khubaro sarsare oo ka socda Slovenia iyo hay'ado caan ah, oo ay ku jiraan EC, UNWTO, WTTC, OECD, ETC, HOTREC, ECM, si ay uga wada hadlaan mustaqbalka dalxiiska (Yurub).
Khubaro caan ah oo caalami ah iyo reer Slovenia, martida, guddiyada iyo wakiillada dalxiiska Slovenia waxaa ka hadlay Wasiirka Horumarinta Dhaqaalaha iyo Teknolojiyadda Zdravko Počivalšek, Agaasimaha Guud ee Suuqa Gudaha, Warshadaha, Ganacsiga iyo SMEs ee Komishanka Yurub Kerstin Jorna, Agaasimaha Slovenia Guddiga Dalxiiska MSc. Maja Pak, Agaasimaha Waaxda Gobolka ee Yurub ee UNWTO Prof. Alessandra Priante iyo Agaasimaha Guddiga Dalxiiska Qaranka Portugal iyo Madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Yurub (ETC) Luis Araújo.
Faafida COVID-19 waxay su’aalo badan u soo jeedisay dalxiiska, oo ka mid ah kuwa ugu daran waa badbaadada iyo soo kabashada, oo ay weheliso u beddelidda warshadaha dalxiiska mid adkaysi leh oo waarta. In kasta oo ay xaaladdu adag tahay, haddana saadaasha wanaagsan ee hay'adaha dalxiiska caalamiga ah ee muhiimka ah ayaa sii kordhaya. Guddiga Dalxiiska ee sannadkan ayaa ka dooday su'aasha ah Maxay mustaqbalka u keeni doontaa dalxiiska Yurub.
Ka -qaybgalayaashu waxay isku raaceen in masiibada ay saamayn weyn ku yeelatay warshadaha dalxiiska oo ay keentay caqabado badan, iyo waliba fursado. Waxaa la joogaa waqtigii wax laga qaban lahaa cilladaha ka jira warshadaha dalxiiska ee ka dhashay ballaarinta 50 -kii sano ee la soo dhaafay oo dalxiiska loo beddeli lahaa warshad aad u cagaar badan, dijitaal ah oo loo dhan yahay. Gabagabada muhiimka ah ee lagu gartay guddigu waxay ahaayeen:
Kalsoonida dalxiiska ee safarka ayaa u baahan dib -u -dhis.
Hab -maamuuska socdaalka iyo isgaarsiinta iyo isuduwidda ka dhexeeya Dawladaha xubinta ka ah xannibaadaha safarka, tijaabooyinka COVID iyo xeerarka karantiil ayaa u baahan in la hagaajiyo.
Qorshe -hawleedka ku -meelgaarka waara ayaa loo baahan yahay.
Tilmaamayaasha waxqabadka cusub ayaa loo baahan yahay.
Isbedelka dhijitaalka ah ee warshadaha dalxiiska ayaa u baahan in la taageero oo kor loo qaado.
Maalgashiga iyo qoondaynta maalgelinta Midowga Yurub ee ku wajahan sii jiritaanka iyo digitalization -ka ee warshadaha dalxiiska ayaa loo baahan yahay.
Kala -guurka DMO kaalintooda si ay si firfircoon ugu fududeeyaan geeddi -socodka kala -guurka warshadaha si ay u noqdaan kuwo cagaaran, loo dhan yahay iyo baahiyaha dijitaalka ah in la taageero.
Afar dalxiisayaal Ruush ah ayaa maydkooda laga helay hoteelka Albania ...
Bangiga Shiinaha ayaa ku dhawaaqay in dhammaan heshiisyada crypto ay yihiin sharci darro ...
Iyada oo kala duwanaanshaha COVID-19 uu sii kordhayo, maaskaro wajiga saaran diyaaradaha ...
Diyaaradda British Airways ayaa ku laabatay Budapest iyadoo London ...
Marxaladda dambe ee safarka masiibada hawada adduunka ayaa noqon doonta ...